HPC199 AI Kaontera fivarotanadia fiara manisa izay manisa fiara miditra sy mivoaka. Azo ampiasaina koa izy hanisa zavatra hafa na ampiasaina ho an'ny olona manisa. Betsaka amin'ny antsikaKaontera fivarotana dia vokatra misy patanty. Mba hisorohana ny plagiarism dia tsy nametraka atiny loatra tao amin'ny tranonkala izahay. Azonao atao ny mifandray amin'ireo mpiasan'ny varotrao mba handefasana anao amin'ny antsipiriany momba ny anayKaontera fivarotana.
HPC199 AI Kaontera fivarotana manana chip fikirakirana AI namboarina, izay afaka mamita tsy miankina ny fanarahana lasibatra, fanisana isa ary fanaraha-maso. Azo ampiasaina amin'ny fifehezana anti-tailing, fanisana fiara, fifehezana be loatra, fitantanana ny faritra ary tranga hafa. Izy io koa dia azo ampidirina amina mpamadika horonantsary marika DVR mba hanomezana horonantsary famaritana avo lenta sy vokatra fanisana maro-tanjona sy asa maro miaraka amin'ny lahasa fanaraha-maso, HPC199 AIKaontera fivarotana azo ampiasaina amin'ny Internet na mijoro irery, ary afaka manome vahaolana fanaraha-maso fiarovana manan-tsaina ho an'ny fizahan-tany ara-barotra, fivarotana, parks, banky, fitaterana an-dàlana ary indostria hafa.
HPC199 AI Kaontera fivarotana mampifandray ny asan'ny statistikan'ny fifamoivoizana, izay tsy voakasiky ny zoro fahitana.
Ny haben'ny fomba fijery farany ambony dia afaka mandrakotra hatramin'ny 20 metatra. Afaka manara-maso tanjona 50 amin'ny fotoana iray izy io.
Ny fanisana fiara dia tanterahina araka ny faritra namboarina sy ny lalana fanisana kinendry.
HPC199 iray ihany kaontera fiara afaka mahatsapa antontan'isa samihafa momba ny fiara miditra sy mivoaka.
HPC199 AI Kaontera fivarotanamandrafitra ny famolavolana tantera-drano IP65, izay afaka manatanteraka ny fanisam-piarakodia amin'ny fahitsiana mitovy na dia ampiasaina any ivelany aza. HPC199 AI Vecounter hicle manohana ny fametrahana amin'ny zoro rehetra, ary ny mety ho voakitika eo ambanin'ny jiro, hazavana na hazavan'ny masoandro dia ambany dia ambany. Afaka manivana ho azy ny vokatry ny aloky ny lasibatra izy io. Mampiasà sensor sensor tena mora tohina izy na dia amin'ny alina aza misy hazavana manodidina. Antontanisa fanisana fiara mahazatra. Rehefa ny HPC199 AIKaontera fivarotana tsy afaka mamantatra tsara ny tanjona kendrena amin'ny zoro manokana, ny fianarana sy ny fiofanana kendrena dia azo ampiasaina mba hampitomboana ny santionany kendrena hanatsarana ny tahan'ny fanekena.
Fiasan'ny fanisana fiara amin'ny HPC199
1. Fitantanana ny mpampiasa tambajotra, fampifanarahana ny fotoana amin'ny tambajotra, manohana ny fanaraha-maso ny fotoana lavitra.
2. Tohano ny fihenan'ny tabataba 3D nomerika, mazava kokoa sy malefaka kokoa ny sary.
3. 1 RJ45 interface, 1 DC12V interface, interface adiresy 1 mahery, interface 1 RS485.
4. Tohano ny protokol ONVIF, protokol G28181 fenitra nasionaly.
5. Manohana ny fitiliana ny fivezivezena amin'ny mpandeha, ny fizahana ny fivezivezin'ny fiara, ny fanaraha-maso ny faritra fanohanana, ny fikorianan'ny mpandeha ary ny fifangaroan'ny fiara mifangaro.
6. Tohano ny asa famerenana mandeha ho azy aorian'ny tsy fahombiazan'ny herinaratra / tsy fahombiazana tsy ampoizina.
7. Tohano ny superposition toetra, ny toeran'ny superposition azo ovaina ary ny fisehoan'ny loko mandeha ho azy.
8. Famolavolana kilasy indostrialy, rafitra tsotra, avo lenta ary fitoniana mafy.
9. Tohano ny fanovana mandeha ho azy ny sivana hahafantarana ny fanaraha-maso ny andro sy ny alina, tohano ny fanaraha-maso ny telefaona finday; Famatsiana herinaratra POE (tsy voatery).
10. Fanaraha-maso ny fizahana fihetsiketsehana / fisokafana ny efijery, faritra 4 famaritana ary faritra 4 fanodinkodinana azo apetraka.
11. Ny mpampiasa dia afaka misafidy ny kaody fehezan-dalàna ary manitsy ny tahan'ny taha, ny famahana ary ny kalitaon'ny horonantsary.
Famaritana ny elanelan-tany
Maody famatsiana herinaratra
DC12V fahefana adaptatera
SONY IMX, 1 / 1.8 "CMOS Scan Progressive
Fanazavana ambany indrindra
0,1 Lux (tontolon'ny Streetlight amin'ny alina)
10-30 frame / segondra
Riaka lehibe 3840 × 2160 Sub stream 1280 × 720
Fanasokajiana ny toetran'ny fiara
Bisy / kamio / fiara / moto (bisikileta) / bisikileta
Fitantanana lozisialy amin'ny tranonkala
Tatitra eo an-toerana
Seranan-tsambo tambajotra, seranan-tsambo 485
Lahatsary mpanohitra fiara HPC199 AI ho an'ny fanisana fiara
Manana karazana IR maro isika Kaontera fivarotana, 2D, 3D, AI Kaontera fivarotana, misy foana izay mety aminao, azafady mifandraisa aminay, hanoro ny mety indrindra izahay Kaontera fivarotana ho anao ao anatin'ny 24 ora.
Teo aloha: MRB AI mpanohitra mpanohitra HPC198
Manaraka: Fakan-tsary MRC010 lohan'ny loha manisa